Dóra Holiday House-AP2 - Keszthely - Lake Balaton 200 m - I-Airbnb
Dóra Holiday House-AP2 - Keszthely - Lake Balaton 200 m
Indlu isembindini kwindawo enye yezona ndawo zixakeke kakhulu eKeszthely, i-5-10 imizuzu yokuhamba (Városi Strand - Balaton, iindawo zokutyela, amaziko omsitho, isitalato sabahambi ngeenyawo, ibhasi kunye nesikhululo sikaloliwe - 200-500 yeemitha) kwisitrato esizolileyo! Inqaba yeFestetics 900 m
Indlu yethu yokuhlala inamagumbi ama-2 aneendawo zokungena ezihlukeneyo, ezizimeleyo!
Indlu epapashiweyo iphezulu, ebizwa ngokuba yi "Balaton", eyi-55 m2 + 15 m2 ene-terrace enkulu yophahla - i-barbecue!
Ixesha lasehlotyeni: ngoJuni 15 ukuya kwi-31 ka-Agasti
Ngaphandle kwexesha lonyaka, ukuba ungaphantsi komthamo ochaziweyo, cela ikhowuti yomntu ngamnye usebenzisa i-Airbnb!
Ikhululekile: ukusetyenziswa kwelinen yelinen kunye neetawuli, indawo yokupaka, i-WIFI, iibhayisikili ezi-2, ikofu kunye netiyi!
Ukuba uhlawulwe kwindawo ekufikeni kwayo: IRHAFU: 1.50 euro / umntu / ubusuku (irhafu yabakhenkethi) kwiminyaka eyi-18!
Ukuba ufuna iibhayisekile ezingakumbi, kukwakho nendawo yokuqasha ibhayisekile esitratweni ngamaxabiso amahle! Singakunceda uququzelele ukhenketho lwebhayisekile!
Ebudeni bokushisa kwehlobo, umoya womoya uqinisekisa ukuhlala kakuhle, ukuba indlu idlula i-24 degrees Celsius, ixabiso lenkonzo likhululekile!
Ifumaneka ngesicelo, umrhumo wemihla ngemihla 5 Euro!
Iibhafu ezilungileyo kakhulu ze-thermal eHungary zikufuphi, kuyacetyiswa ukuba upakishe i-swimsuit! I-Hévíz ikumgama weekhilomitha ezi-6 kwaye kukho iinkonzo zebhasi eziqhelekileyo kwi-300 m ukusuka endlwini!
Indlu ibekwe embindini weyona ndawo ixakeke kakhulu eKeszthely, imizuzu emi-5 ukuya kwe-10 ukuya kuyo yonke into (iCity Beach - iLake Balaton, iindawo zokutyela, amaziko omsitho, isitalato sabahambi ngeenyawo, ibhasi kunye nesikhululo sikaloliwe - 200-500 yeemitha) kwisitrato esithe cwaka. ! Inqaba yeFestetics 900 m
Ndihlala ndifikeleleka, nokuba ungathini na umbuzo, ndiyafumaneka! (emntwini, ifowuni, i-imeyile, uMthunywa, Viber, WhatsApp)
"Andihlali apha endlini, kugcinelwe iindwendwe kuphela!"
Inombolo yomthetho: MA19017474